हार्ने थाहा हुँदा हुँदै अध्यक्षमा किन भिडेका थिए भीम रावल ? यस्तो ट्वीटले फेरि खैलाबैला ! - Nepalese Times
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आज कति संक्रमित थपिए ?7घण्टा अघि
नेपालमा फेरि अर्को न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश, आज कुन-कुन ठाउँमा पर्दैछ पानी ? 16 घण्टा अघि
नेप्लिज संवाददाता १५ मंसिर २०७८, बुधबार १८:५३ (1 महिना अघि) ७५५ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्षमा हार्ने निश्चित हुँदा हुँदै पनि उम्मेदवारी दिनुको कारण खोलेका छन् ।
उनले पार्टीलाई विधि पद्धतिमा हिडाउँन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको दाबी गरे।
१०‍औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा पराजित रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत एमाले पार्टीलाई सिद्धान्त, विधि, पद्धति र राष्ट्रिय हित अनुकूलको बाटोमा हिडाउन मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको उनले जिकिर गरेका हुन् ।
त्यसका लागि महाधिवेशनमा आवाज उठाउनुका साथै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको उनले प्रष्टोक्ति छ । रावलले आफूलाई साथ,समर्थन, सहयोग, मत र उत्साह दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्।
उनले लेखेका छन् ‘एमाले पार्टीलाई सिद्धान्त, विधि, पद्धति र राष्ट्रिय हित अनुकूलको बाटोमा हिडाउन मैले अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने अठोट गरे अनुसार महाधिवेशनमा आवाज उठाउनुका साथै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ। मलाई साथ,समर्थन, सहयोग, मत र उत्साह दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु।’
एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीले १८३७ मत ल्याउँदै निर्वाचित भए । यस्तै, भीम रावलले २२३ मत ल्याए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले ‘असहज’ वातावरणका बीच आफूले प्राप्त गरेको मतलाई महत्वपूर्ण ठानेको बताएका छन्।
मंगलबार साँझ चितवनको सौराहामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रावलले भने, ‘महाधिवेशनका विविध पक्षको विवेचना म काठमाडौंमा गएर गर्नेछु । तर, जुन वातावरणमा मैले जति मत प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई महत्वपूर्णरुपमा लिएको छु ।’ उनले भने ।
अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका रावलले आफू पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आफूले अध्यक्षमा मात्र उम्मेदवारी दिएको र त्यहाँ पराजय भोगेपछि अहिलेको अवस्थामा कुनै कमिटीमा नरहेको रावलको भनाइ छ।
‘निर्वाचन आयोगसँग पनि मैले अध्यक्षमा मात्र उम्मेदवारी दिने हो, सदस्य होइन भनेको थिएँ। आयोगले दुईटै पद हो भने दुईटै लेख्नुहोला, एउटा भए एउटै हुन्छ भनेको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष (त्यसबेलाका महासचिव)लाई पनि मैले भनेको थिएँ। मतदान गर्नेबेला मेसिनमा सार्दाखेरी मैले देखेँ, अनि मैले त्यसबारे थप प्रष्ट पारेको थिएँ,’ रावलले भने।
उनले भने, ‘मैले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदारी नै दिएको छैन भने कसरी निर्वाचित हुन सक्छु ?’रावलले विधान महाधिवेशनबाट पारित गरिएको विधान र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)अन्तर्गत अगाडि सार्न खोजिएको विषयलाई महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्न नसिकएको बताए।
‘विधान महाधिवेशनबाट जुन विधान पारित गरिएको थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अन्तर्गत् जे कुरा अगाडि सार्न खोजेका थियौं, त्यसलाई यहाँ सम्बोधन गर्न सकिएन,’ रावलले भने।
कमिटीमै नरहँदा कसरी काम गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा रावलले भने, ‘भर्खर त महाधिवेशन सकियो, त्यसलाई भोलि सोचौंला नि।’